यी हुन् नेपालकै अभागी कलाकार, जस्ले आफ्नै आमा बुवासँग सफलताको खुशी साट्न पाएनन् ! – Hamro Lumbini
सन्तान सफल हुनुमा आमा बुवाको ठूलो भूमिका हुन्छ । आमा बुवाको साथ, सहयोग र हौसलाले नै एउटा सन्तानले जीवनको सही बाटो हिँड्ने अवसर पाएको हुन्छ । जसलाई आमा बुवाको साथ र सहयोग हुन्छ उसलाई जीवनमा अघि बढ्न सहज पनि हुन्छ । तर कसैलाई भने त्यो साथ मिल्दैन । तर पनि त्यस्ता व्यक्ति सफलताको चुचुरोमा पुग्न सकेका हुन्छन् । आज हामीले यो सामाग्रीमा केही सफल व्यक्तिहरुलाई समेटेका छौं जसमध्ये कसैले सानैमा आमा गुमाए त कसैल बुवा । देशकै सफल र चर्चित व्यक्ति बन्दा उनीहरुले त्यो खुशी आफ्नो आमाबुवासँग साट्न पाएनन् ।
जीवनमा पैसा कमाएर घर किनेको दिनमा उनले आमाको तस्विरलाई नै ल हेर्नुस ! आमा घर, भनेर देखाएको बताउँछिन् । दीपाश्री १५ वर्षकी हुँदा उनकी आमाको देहान्त भएको थियो । उमेरमै आमाको निधन भएर बुवा एक्लो भएपछि दीपाश्रीले बहिनीहरुसँग मिलेर बुवाको दोस्रो विवाह गरिदिएकी थिइन् ।उनकी दोस्रो आमाबाट पनि एउटा भाई र बहिनी छन् । दीपाश्रीले आमाको निधन भएपछि नै अभिनयको सुरुवात गरेकी हुन् । टेलिसिरियल ‘अग्निपथ’बाट अभिनय थालनी गरेकी उनले त्यसपछि रेडियो नेपालमा दीपक राज गिरीसँग राम विलास र धनिया नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन् । यस अवधिमा उनले केही सिनेमाहरुमासमेत अभिनेत्रीको रुपमा काम गरेकी थिइन् ।